Usoro Ihe Omume JW—Septemba 2016 (MWB) | JW.ORG
Ebe otu nwanna nwaanyị na-ezi otu nwaanyị na nwa ya ozi oma n’obodo West Bengal dị n’India
Otú e nwere ike isi nye mmadụ Ụlọ Nche, nakwa otú e nwere isi jiri ebe sịrị Na-akụzi Eziokwu mee ka mmadụ ghọta na Chineke na-eche banyere anyị. Jiri aro ndị a dee otú ọzọ ị ga-esi jiri akwụkwọ a zie ozi ọma.
Gịnị ka ije ije n’iwu Jehova pụtara? O nwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ịmụta n’aka onye dere Abụ Ọma nke 119.
Otú ị ga-esi kwanyere ndị mụrụ nwatakịrị ùgwù.
E mere ihe atụ ndị gosiri na Jehova na-echebe ndị ya n’Abụ Ọma 121.
N’Abụ Ọma 139, Devid kọwara ụzọ dị ebube Jehova si kee anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ihe anyị na-akụziri mmadụ ruo ya n’obi, gịnị ka anyị kwesịrị izere?
Abụ Ọma 145 kwuru ihe gosiri otú obi dị Devid gbasara otú Jehova si na-elekọta ndị ya.
Ọ na-abụkarị ndị nwere mmasị na ndị anyị na-amụrụ ihe bido bịawa ọmụmụ ihe, ha emewekwuo nke ọma.